जलविद्युत विकासमा दुगड समूह- लिखु खोलामा ३२ अर्ब लगानी, स्थानीय जीवनस्तरमा फड्काे - UrjaKhabar जलविद्युत विकासमा दुगड समूह- लिखु खोलामा ३२ अर्ब लगानी, स्थानीय जीवनस्तरमा फड्काे - UrjaKhabar
जलविद्युत विकासमा दुगड समूह- लिखु खोलामा ३२ अर्ब लगानी, स्थानीय जीवनस्तरमा फड्काे
काठमाडौं । रामेछापको शिवालयबाट अगाडि बढेपछि कच्ची बाटो सुरु हुन्छ । अनेक घुम्ती, मोड, खोला र भिरालो हुँदै बाटो खनिएको छ । यही बाटो देउराली, बाम्ती भण्डार, किन्जा हुँदै उत्तरतिर तन्किँदै गएको छ । अहिले यो रामेछाप र सोलुखुम्बुबासीका लागि दैनिक जीवनयापनको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । हिजोको बाटो आज सडकमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान गर्न पनि यो सडकले ठूलो भूमिका खेलेको छ । अझ रामेछाप र सोलुखुम्बुको सीमा भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणाधीन आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनाका लागि त यो सडक बरदान साबित भएको छ । करिब १ सय १० किलोमिटर लामो यो सडक राज्यले निर्माण गर्ने एउटा राजमार्गकै स्वरूप हो ।
निजी क्षेत्रले पहुँचमार्गका रूपमा यति लामो सडक बनाएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु आफैंमा आश्चर्य हो । आश्चर्यलाई वास्तविकतामा बदलेको छ, एमभी दुगड समूहले । पछिल्लो समय आफ्ना सबै ब्यापार, व्यवसाय बेचेर जलविद्युत क्षेत्रमा केन्द्रित दुगडले निर्माण गरेको यही सडकले स्थानीय जनजीवन, अर्थतन्त्र, शिक्षा तथा स्वाथ्यमा त्यस क्षेत्रको काँचुली फेरिएको छ ।
उक्त व्यापारिक घरानाले ८० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलेर डबल लेन सडक बनाएको छ । यो सँगै स्थानीयको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यातायात आवागमनका लागि विभिन्न ठाउँमा गरी थप ५० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । यसले स्थानीयको कष्टकर दैनिकीलाई सुगम बनाइदिएको छर्लङ्ग हुन्छ ।
यति लामो सडक निर्माण गरी आयोजना निर्माण गर्न यस ब्यापारिक घरानालाई के बाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । यसरी सडक निर्माण गर्दा तोकिएको आयोजना आर्थिकरूपले सम्भाव्य नदेखिन सक्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वा लोककल्याणकारी जेसुकैमा खर्च गरेको रकम अन्ततः आयोजनामै जोडिने हो । यसले आयोजनाको लागत महँगो बनाउँछ ।
यही कारण आयोजना सम्भाव्य नहुन सक्छ वा लागत अति महँगो हुन्छ । परिणामः बैंकको ऋण तिर्ने समय लम्बिन्छ । र, लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ । अझ दुगडले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत करिब ३० किलोमिटर प्रसारण लाइन आफैं निर्माण गरी न्यू खिम्तीसम्म पुर्याउनुपर्छ ।
खर्चै–खर्च एकपछि अर्को लगानी र अनेक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा फेरि पनि दुगडका आयोजना आर्थिकरूपले सम्भाव्य होलान् भन्ने प्रश्न उठ्छ । विविध अप्ठ्यारा र दायित्व बढी रहे पनि दुगड समूहले लिखुमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुको पछाडि एउटा बलियो आधार हो, खोलाको बहाब अर्थात् हाइड्रोलोजी ।
लिखु हिमनदीमा आधारित भएकाले यसको बर्खा र हिउँदको बहाबमा त्यति ठूलो परिवर्तन नदेखिने अध्ययनले देखाएको छ । हाइड्रोलोजी राम्रो हुनु जलविद्युतका लागि आकर्षक पक्ष हो । अर्को, दुगडले एउटै खोलामा ३ वटा आयोजना निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र पाएको छ । यसो हुँदा केही बढी पूर्वाधार तथा सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सन्तुलन मिलाउँदै आयोजनाहरू सम्भाव्य बनाइएको समूहका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड बताउँछन् ।
एउटा खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहँदा के–के कुरामा परिवर्तन आउँछ भन्ने लिखुले प्रमाणित गरिसकेको छ । दुगडले निर्माण गरेको सडककै कारण लिखु बेसिनमा थप ४ वटा आयोजना निर्माण चरणमा पुगेका छन् । यसो त दुगडले सबै आयोजनालाई सडकले जोडिदियो । स्थानीयका माग र जनगुनासा सुन्दै बजार व्यवस्थापन, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा काम गरिरहेको छ ।
दुगडले निर्माण गर्ने लिखु–१, २ र लिखु ‘ए’बाट १ सय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ मान्दा झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिन्छ । यो सोझो लगानी र प्रत्यक्ष परिणाममात्र हो । अप्रत्यक्षरूपमा आयोजनाले स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकासको क्रान्ति नै ल्याउँछ भन्दा अन्यथा हुँदैन । यति हुँदा–हुँदै अझै स्थानीयबासी जलविद्युत उत्पादनको हकमा सकारात्मक हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
लिखु–१ (७७ मेगावाट)
दुगड समूहले निर्माण गर्ने मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा लिखु–१ निर्माण हुँदैछ । ६ ठाउँबाट अडिट सुरुङ (सहायक सुरुङ) खन्ने काम पूरा भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । अबको एक वर्षभित्र करिब साढे ७ किलोमिटर सुरुङ र निर्माणका सबै काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म आयोजनाको करिब ४४ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
आयोजनाको मार्बुमा बाँध र ताङदिङमा विद्युतगृह निर्माण हुनेछ । आयोजनाका अनुसार अहिले बाँधस्थलको काम सुरु भएको छ । करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको विद्युत जोड्न किन्जामा स्वीचयार्ड निर्माण गर्ने योजना छ ।
लिखु–२ (५३ मेगावाट)
लिखु–१ को टेलरेस (पानी निकास सुरुङ) भन्दा करिब २ सय मिटर तल्लो क्षेत्रमा लिखु–२ को बाँध निर्माण हुनेछ । अहिले बाँधस्थल र विद्युतगृह खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । बाँधदेखि विद्युतगृहसम्म पानी ल्याउन आवश्यक ६.४ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये अब १२ सय मिटरमात्र खन्न बाँकी छ ।
आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म लिखु–२ को निर्माण करिब ६० प्रतिशत पूरा भएको छ । आगामी ८ महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । उत्पादित विद्युत किन्जामा निर्माण हुने स्वीचयार्डमा जोडेर न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा पुर्याइनेछ ।
लिखु–ए (३० मेगावाट)
लिखु खोलामा दुगडले निर्माण गर्ने सबैभन्दा पुछारमा यो आयोजना पर्छ । अहिलेसम्म यसको करिब ८० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम पूरा हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको २.८ किलोमिटर सुरुङ गत मंसिरमै पूरा भएको थियो ।
तीन वटै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत जोड्न किन्जामा छुट्टै स्वीचयार्ड निर्माण गर्नेछ । र, त्यहाँबाट ० किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी २२० केभी न्यू खिम्ती सबस्टेसनसम्म पुर्याउनेछ । प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गरिएको जनाइएको छ ।
समूहले तीन वटै आयोजना निर्माण गर्न बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक निर्माण गरेको छ । यो सँगै लिखुमा २ वटा पक्की तथा ४ वटा बेली ब्रिज पुल निर्माण गरेको छ । यो आयोजनाका लागि मात्र नभई स्थानीयबासी र यातायात आवागमनका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनेको छ ।
यसैगरी, आयोजनाकै खर्चमा ४५ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी आवश्यक विद्युतको जोहो गरिएको छ । तीन आयोजनामा निर्माणका लागि करिब ३ मेगावाट विद्युत उपयोग भइरहेको छ । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खपत योजनामा सहयोग पुर्याएको छ ।
रामेछाप र सोलुखुम्बु जिल्ला जोड्न सरकारले निर्माण गरिरहेको पुल ९ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको थिएन । यसलाई दुगड समूहले नै जिम्मा लिएर निर्माण पूरा गरेको छ । यसबाट दुई जिल्लाको यातायात आवागमनमा अमूल परिवर्तन देखिएको छ । जसका कारण स्थानीयबासी निकै हर्षित देखिन्छन् ।
तीन वटै आयोजनामा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी झन्डै १४ सय व्यक्तिले काम गरिरहेका छन् । स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै होटल ब्यापारी, तरकारी उत्पादन गर्ने किसान, पशुपालन गर्नेहरूको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ ।
आयोजनाले गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू
१. १३० किलोमिटर सडक निर्माण
२. ३३ केभी ४५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन
३. दुई वटा पक्की र ४ वटा बेली ब्रिज
४. किन्जास्थित स्वास्थ्य चौकीको जिर्णोद्धार
५. बाम्ती भण्डारमा पशुहरूको कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
६. स्थानीय विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण
७. मठ, मन्दिर, गुम्बालाई आर्थिक सहयोग